Taariikhda Wasiirada cusub ee la magacaabay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Taariikhda Wasiirada cusub ee la magacaabay
Taariikhda Wasiirada cusub ee la magacaabay
Wasiirka Arrimaha Dibedda Xukuumadda Soomaaliya ee cusub Mudane Axmed Ciise Cawad, waxa uu dhashay sannadkii 1955-tii heerarkiisa waxbarasho ayaa kala ahaa, waxbarashada koowaad ee Jaamacadda waxa uu ku qaatay Concordia University Montreal, waxbarashada Master-ka ayuu ku diyaariyey Institute of peace and Security ee dalka Ethiopia.
Waxa uu soo noqdey Sargaal ka tirsan Qaramada Midoobey sannadihii 2005-tii ilaa 2015-kii dhammaadkeeda, sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyey Dalka Suudaan, isagoo ka mid ahaa saraakiishii loo diray gobolka Darfur.
Cabdi Maxamed Sabriye waxa uu ku dhashay degmadda Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud sannadkii 1957-dii, Waxbarashadiisa dhexe iyo sare waxa uu ku soo qaatay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, waxa uu ka baxay Jaamacadda Gaheyr, shahaadada Master-ka ayuu ka diyaariyey Newcastle University ee dalka Uk.
Waxa uu ka soo shaqeeyey Mr Sabriye Sideed tameeyadii Wasaaraddii Howlaha Guud iyo Wakaaladdii Hindisaha Qaranka, 1994-tii waxa uu ka soo shaqeeyey Waaxda Bey’ada ee ururka Midowga Africa, xaruntiisu tahay Addis Ababa iyo hey’adda Q.M u qaabilsan horumarinta ee UNDP.
Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) waxa uu dhashay sannadkii 1970-kii, waxa uu ku dhashay magaalada Caynaba ee gobolka Togdheer.
Waxbarashadiisa dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay magaaladda Muqdisho, waxa uu heystaa Shahaadada Master-ka oo uu ka diyaariyey Bussinse Administration, sidoo kale waxa uu heystaa Diploma Political Science iyo Diploma Bussinse Accouting, sidoo kale waa qoraa, buugaagta uu qoray waxaa ugu caansan, buugga weyn ee uu ka uruuriyey shuruucdii Soomaaliya ee lagu magcaabo Fundamintal Laws and Ragultion Somalia Since 1960-kii waa magaca buugga uu qoray.
Waxa uu soo noqdey wasiirkii warfaafinta sannadkii 2005-2007, sidoo kale waxa uu noqdey wasiirkii dib u heshiisiinta iyo Jaaliyadaha, waxa uu noqdey wasiirkii Shaqada, shaqaalaha iyo Arrimaha Bulshada 2009-2010- kii, waxa uu mar kale noqdey wasiirkii Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska 2015-
4-ta Jannaayo waxaa loo magcaabay wasiirka Ganacsiga iyo Warshadahada Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye